Dadka dal aysan Turkiga isku fiicnayn oo halkaa ugu qulqulaya adeegga timo beerista | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Dadka dal aysan Turkiga isku fiicnayn oo halkaa ugu qulqulaya adeegga timo...
Dadka dal aysan Turkiga isku fiicnayn oo halkaa ugu qulqulaya adeegga timo beerista
(Ankara) 24 Feb 2020 – Ragga reer Israel ayaa raxan raxan u tegaya dalkaasi Turkiga si timaha loogu beero, tiiyoo aanu fiicnayn xiriirka Yuhuudda iyo Turkigu.
Ku dhowaad 200,000 oo Israeli ah ayaa arrintaa darteed Turkiga u booqday 2014-kii, balse tiradaasi iminka waxay sare ugu kacday ilaa 500,000 marka la eego tirakoobkii 2019-kii, sida uu faafiyey Machadka Tirakoobyada Turkiga (TurkStat).
Yuhuudda Turkiga kusoo jabtay ayaa inta badan la dhacsan tayada iyo khibradda wehlisa adeegga ay usoo doontaan dalkaasi, gaar ahaan dhanka qalliinnada qurxinta ah (plastic surgery) iyo kuwa tima beerista.
Dalxiiska caafimaadka lagu tago Turkiga ayaa sii kordhaya iyadoo ay dadka Yuhuuddu la socdaan iidhehyada arrintan oo lagu arki karo meel kasta oo dalkaasi ah.
Ganacsade Aviad Bitton, 34 jir, oo iska leh sharikad dalxiis ayaa sheegay inuu qiyaastii ilaa 100 qof oo doonaya in timaha loo beero uu Turkiga geeyo bishiiba, isagoo hoosta ka xarriiqay inay macaamiishiisu door bidayaan Turkiga oo bixinaya adeeg rakhiis ah misna aad u tayo badan.
Previous articleKenya oo qiratay inay ku khasaartay muranka ay la gashay Somalia (Cadaadis uga imanaya ganacsatada)
Next articleSucuudiga, Imaaraadka & Khaliijka oo gabdho masaakiin ah looga soo raro Bariga Afrika (Qaar la qabtay & waxa loo wadey)